Fifanarahana Virgo sy Libra: Fisakaizana, firaisana ara-nofo ary fitiavana - Famantarana Zodiac
Fifanarahana Virgo sy Libra: Fisakaizana, firaisana ara-nofo ary fitiavana
Misy fifandanjana marefo izay mahatonga ny fampifanarahana Virgo sy Libra ho zava-misy ho an'ity mpivady ity. Ireo zavatra iraisan'i Virgo sy Libra iraisan'ny rehetra dia manome fototra mendrika ho an'ny finamanana sy ny fitiavana. Saingy, misy ny tsy fitovian-kevitra izay miteraka fandrika lehibe sasany eo amin'ny fifandraisana ihany koa. Ny fahafantarana ny zavatra miandry ho an'ity pairing romantika ity dia mampitombo be ny fifanarahana.
Amin'ny ankabeazany, ny fifankatiavana Virgo sy Libra dia manana fialam-boly mampihetsi-po hatrany am-piandohana. Ny 'fahatsapana tsara' dia avy amin'ny fahaizan'i Libra manaitra sy manaitra. Virgo dia mankafy ny fanantenana, ny hafaliana ary ny vazivazy tsara an'i Libra. Mahatonga azy ireo hahatsapa ho 'velona 'amin'ny tontolo izay matetika hitany amin'ny alàlan'ny solomaso malaso sy mamakafaka.
Vetivety dia mihetsika ny fihoaram-pefy eo amin'ny vady Virgo sy Libra. Mila mahafantatra ny fomba fitazonana ny angovo izy ireo raha hanao izay haharetany. Amin'ny maha-olona voafidy azy ireo dia tsy maintsy mitaingina onja mahery vaika amin'ny fifandraisana izy ireo. Ny onja toy izany dia latsaka eo ambany fitarihan'ny toe-po, tontolo iainana ary ny fomba fijerin'ny antoko tsirairay amin'ny fiainana. Raha lasa afa-po ny andaniny na ny ankilany, dia milentika mahery vaika ny fifandanjana eo amin'izy ireo!
Virgo sy Libra Loha Hevitra ato Anatiny
Fifanarahana Virgo sy Libra
Fitiavana Virgo sy Libra
Virgo sy firaisana Libra
Fifanarahana Virgo Man sy Libra Woman
Fifanarahana Virgo Woman sy Libra Man
Virgo sy Libra Love Match Wrap-Up
Ao amin'ny fifankatiavana Virgo sy Libra, tsy manana olana amin'ny fifandraisana izy mirahalahy ireto. Tia miresaka toa ny Virgos ny Libras. Ny hany zavatra tokony hataon'i Libra dia ny mianatra manapaka ny fahalalahana. Ny tsara indrindra dia ny mivantana rehefa miresaka amin'ny Virgo, mba tsy hialany ny Libra. Ity antoko ity dia tsy manana olana amin'ny fifanajana amin'ny endrik'izy ireo. Samy miziriziry mijery tsara. Samy mahalala ihany koa ny teny tsara fanahy roa izay hamporisika ny fifikirana hatrany.
Rehefa miresaka Virgo dia mivantana sy fohy. Maika ny hahalala ny marina izy ireo. Virgo dia manome lanja isa-minitra ary tsy mandany fotoana hikapohana ny kirihitra. Libra dia hanana Virgo manandrana mamantatra ny pso sy mamaky eo anelanelan'ny andalana. Ny toetra Virgo dia tsy miraharaha firy ny fanesoana, ary ny hatsikana mainty izay ampiasain'ny Libras. Handany fotoana be izy ireo maniry ny hahitsy miaraka amin'izy ireo i Libra ary hilaza izay tiany holazaina. Tian'izy ireo ny serasera fifandraisana mangatsiaka sy mivantana. Ny endrik'izy ireo dia samy hafa be amin'ny bibilava izay midika hoe Libra ampiasain'ny fanehoan-kevitra.
Virgos dia tsy mampihetsi-po, mahafinaritra ary lavitra amin'ny fifandraisana. Libra afaka manaisotra izany fihetsika izany amin'ny ambaratonga ambonimbony, fa manjaka ny korontana anatiny. Raha tsy maintsy manafina ny fihetseham-pony mandrakariva i Libra, dia mety hitady hafa ny fahatanterahan'ny fihetseham-pony. Ny fanarahana ny filan'ny fihetseham-po amin'ny tsirairay dia manamafy ny fifanarahan'i Virgo sy Libra.
hevitry ny 33 ao amin'ny Baiboly
Ao amin'ny fifandraisana Virgo sy Libra, ny fiainana mampiaraka dia manomboka toy ny ankamaroan'ny angano. Virgo mahita an'i Libra manaitra tanteraka. Mahatonga an'i Virgo hahatsapa ho tsara izy ireo ary handrovitra azy ireo amin'ny fandokafana. Libra dia midera an'i Virgo amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny bika aman'endriny. Mahomby amin'ny fikolokoloana ny ego'ny Virgo izy ireo. Ny toetran'ny Libra dia manaitra an'i Virgo. Mampiasa teny mamy izy ireo, faharanitan-tsaina mahatalanjona ary toetra maha-olona manambola azy ireo.
Ny fifandraisana voalohany teo anelanelan'ny Virgo sy Libra dia nahavoa an'ity Duo ity. Tsy ela akory dia lasa lohan'ny Virgo ny sidina manintona an'i Libra manintona. Vetivety dia tsapan'izy ireo fa efa nahafantatra an'i Libra nandritra ny androm-piainany maro izy ireo. Tsy mifandray intsony amin'ny fahatsapana ny tena zava-misy izy ireo. Manomboka mieritreritra ny hijoro eo amin'ny alitaran'ny fanambadiana miaraka amin'ny mpiara-mivavaka aminy ry zareo!
Taorian'ny nanesoran'ny mpivady ny solomaso fitiavana, dia nipoitra ny zava-misy. Voalohany, mahatsapa i Virgo fa toa manana fifandraisana champagne sy caviar izy ireo. Fa rehefa milay ny raharaha dia mivadika ho iray amin'ireo masiaka lasopy sy totohondry!
Na izany aza, mbola misy ihany ny ody hatsarana. Hitan'i Virgo fa mahavariana ny fahaizan'i Libra mamoaka fiheverana amin'ny fifandraisana lalina. Libra dia hampiakatra ny hafanana hanandrana hanaitra an'i Virgo hahafahan'izy ireo mitazona ny fifandraisana ho velona. Raha tsy mahavariana an'i Virgo izy ireo dia mahatsapa ho tsy fahombiazana tanteraka i Libra. Hijery ny faravodilanitra izy ireo raha te hanana fotoana hafa amin'ny fitiavana. Mbola ratsy kokoa aza, hanao izany ny Libra na dia tsy manome loha-loha an'i Virgo aza.
Amin'ny lalao fitiavana Virgo sy Libra dia tena manao firaisana ny Libra. Ankafizin'izy ireo ny fifandraisana ara-batana amin'i Virgo. Tsy manana olana amin'ny fireharehana amin'ny fahalehibiazany ara-nofo i Libra. Mety hiteraka iray amin'ireo olana roa izany. Mety hanakana ny Virgo tanteraka izany, tsy hamela azy ireo ho afaka amin'ny firaisana. Na, ny vady naman'ny Virgo dia voatsiratsira ny fitiavan-tena tafahoatra an'i Libra ary mitodika amin'ny fitiavana amin'ny lalana vaovao.
Ny Libras dia mazàna mampitaha ireo olon-tiany efa taloha sy ny sakaizany taloha. Izy ireo aza dia manana rafitra naoty ho an'ny tenany manokana. Virgo dia tsy hijoro ho laharana faharoa amin'ny olon-drehetra. Ny tsara indrindra dia ny Libra forego miaraka amin'ny rafitra fanamarihana hitandrina ny fihavanana.
Virgos dia mitaky tsiambaratelo tanteraka momba izay mitranga ao ambadiky ny rindrin'ny efitrano fandrian. Mahafaly an'i Libra ny miresaka momba ny fitsoahan'izy ireo ara-nofo. Raha mahazo karazana molotra libra libra i Virgo dia mihombo ny fifandraisana. Ny manoroka sy milaza dia fanitsakitsahana ny viriosy dia tsy hohadinoin-tsitrapo.
Virgo sy Libra Communication
Ny fampiroboroboana Virgo sy Libra dia manana fanatrehana ivelany izay vonona, milamina ary voaangona. Samy mangetaheta fientanentanana izy ireo mba hitazomana ny fahalianan'ny tsirairay. Ity duo ity dia mizara ambaratongam-pahaizana mitovy amin'izany, ka ny resaka dia manitikitika ny saina. Hiresaka momba ny filozofia sy ny tantara ary ny zavakanto izy ireo. Miady hevitra momba ny tombotsoany amin'ny literatiora farany koa izy ireo.
Mahafinaritra azy ireo ny mandeha miaraka amin'ny teatra. Virgo sy Libra dia tsy mila hanaiky lembenana loatra amin'ny seho atrehiny. Na opera na mozika, tantara an-tsehatra na kaonseritra an-tsehatra, samy mankafy fialamboly mivantana ny roa tonta. Ny fizarana tombontsoa mitovy amin'izany dia andrin'ny hery eo amin'ny fifandraisana Virgo sy Libra.
Mitombo ny fampifanarahana Virgo sy Libra rehefa mifampijery amin'ny maha mpampianatra sy mpitari-dalana azy ireo izy ireo. Libra dia mahatakatra ny maha-sarotra ny fifandraisan'olombelona. Virgo dia mahatakatra ny toetran'ny olombelona mpandinika. Ny roa tonta dia afaka mifampianatra lesona lehibe iray hafa. Ny fanabeazana arosony dia ny fomba hifandraisana sy hahatakarana ny mpiara-belona aminy. Izy ireo koa dia afaka mifampianatra mifankahazo.
Libra sy Virgo dia toetra mety hivoatra mitokana. Ny hany maha samy hafa azy dia ny hoe Virgo dia faly mitoka-monina foana. Mila manatona rivotra indraindray i Libra. Fa maninona Satria izy ireo dia miantehitra amin'ny lanjan'izy ireo amin'ny fandraisan'ny vondrom-piarahamonina azy ireo.
Ny Libra koa dia voajanahary amin'ny fanampiana ny olona, ​​ary koa Virgos. Samy mahatsapa ny toetra roa tonta rehefa misy olona mila izany ary tonga eo an-tanan'izy ireo izy. Zavatra tsara mety ho tsapan'ny Libras rehefa mila fanampiana ny olona iray satria mety tsy hanontany i Virgos. Handray ny fanampiana izy ireo rehefa atolotra fa tsy azy ireo ny fihazana azy.
Fifandonana Virgo sy Libra
Ity Duo ity dia tsy hitovy amin'ny zavatra mahaliana sy asa atao. Libra sy Virgo dia samy mankafy literatiora. Saingy, ny tantaram-pitiavan'i Libra mamaky raha mamaky zavatra mampihetsi-po i Virgo. Samy tia mozika koa izy ireo. Any amin'ny toerana itiavan'i Libra ny karazan-karazany rehetra, dia aleon'i Virgos mozika kilasika sy rock malefaka. Mila manomana fitsangatsanganana matetika ny mpivady mba hisorohana ny sisin'ny fahasosorana.
Virgo dia tia fotoana fohy any an-trano ary aleony mitokantokana. Ny Libra dia tsy mampaninona ny fitokanana indraindray, fa malazo kosa tsy miaraka amin'ny fiaraha-monina mahazatra. Tsy maintsy mihaona eo afovoany izy ireo amin'ny famaritana ny fijanonana-amin'ny-trano-fotoana sy ny fitsangantsanganana. Miaraka amin'ny fahalianan'ny Virgo amin'ny fandaminana dia hofongarin'izy ireo ny tetiandro handaminana daty.
Amin'ny fanombohan'ny lalao fitiavana Virgo sy Libra, ny fientanam-po dia toa tsy hisy farany. Rehefa miala ny 'solomaso fitiavam-pitiavana' dia mitondra fahadisoam-panantenana ny fahatsoran'ny fifandraisana. Virgo mahatsapa fa nampanantena zavatra betsaka lavitra noho ny notaterin'izy ireo i Libra. Mora variana amin'ny libra i Libra. Raha tsy mitazona ny sain'izy ireo i Virgo, dia tsy ho ela izy ireo dia hitady any an-kafa ny fihetseham-po mampihetsi-po.
Virgo sy Libra Polarity
Ny famantarana rehetra ao amin'ny zodiaka dia mifanaraka amin'ny polarity. Ireo famantarana famantarana hery mahery vaika roa dia i Yin sy Yang. Yin dia hery vehivavy. Lehilahy i Yang. Saingy, ny firesahana momba ny lahy sy ny vavy dia tsy misy ifandraisany velively amin'ny lahy sy ny vavy. Mampita ny toetran'ny hery matanjaka resahina izy ireo.
Ny hery Yin vehivavy dia mandefitra, manome ary tsy mahazaka. Ny hery Yang dia mahery, mahery setra ary mihetsika. Mifameno ny hery roa tonta. Virgo dia mifanaraka amin'i Yin. Mifanitsy amin'i Yang i Libra. Noho izany, misy fifandanjana mifameno voajanahary eo amin'ny famantarana rehefa mandanjalanja.
Raha tsy mahay mandanjalanja ny polarity iray dia miteraka polarization izany. Manova ny toetran'ny famantarana sy ny olona eo ambany fitaoman'ireo polarities izany. Raha maharitra ny polarization an'i Yin i Virgo, dia lasa mahery setra sy mahery setra izy ireo. Raha i Libra no miaina ny polarisasi'ny Yang, dia mahery setra, manjakazaka, ary mpanao didy jadona izy ireo.
Mba hahitana indray ny fifandanjana eo amin'ny fifandraisana, ny ankolafy tsirairay dia tsy maintsy mandray ny zavatra mifanohitra mifanohitra. Mila mihamafy sy mitarika mivantana ny Virgo. Ny Libra dia mila manjary mahay mangoraka kokoa, mahay mangoraka ary manam-pahaizana kokoa. Samy mandeha tsara ny roa tonta rehefa maneho faharetana sy fandeferana. Hanatsara ny fampifanarahana Virgo sy Libra.
Asan'ny Virgo sy Libra
Ny lafiny iray amin'ny resaka astrolojia dia ny fandrefesana ny elanelana misy eo amin'ny famantarana zodiaka roa. Zava-dehibe ny elanelana satria manampy amin'ny fanapahana hevitra ny fifanarahan'ny zodiaka. Ny fandrefesana dia avy amin'ny zoro eo anelanelan'ny famantarana roa amin'ny kodiarana selestialy.
Ao amin'ny paika Virgo sy Libra, ny elanelana misy eo amin'ny famantarana dia famantarana iray. Noho izany, ity mpivady ity ho toy ny lafiny semisextile eo amin'izy ireo. Midika izany fa afaka mijery ity paika amam-pitiavana ity amin'ny olona miaina fiainana mitovy. Manana anton-javatra iraisana vitsivitsy amin'izy ireo izy ireo. Saingy, ny isan'ny fahasamihafana misy eo amin'izy ireo dia avo kokoa. Afaka miaina sy miara-miasa izy ireo, saingy tsy misy asa be dia be mba hitazomana ny fandanjalanjana.
Ny mpanandro sasany dia mahita ny famantarana ny Libra ho fivoaran'ny famantarana Virgo. Ny Virgo dia tsy manana fihetsem-po mahery vaika fa mahita fifandraisana ara-pihetseham-po amin'ny famantarana ny Libra. Libra dia manana vatana ara-pihetseham-po matotra raha i Virgo kosa dia mijanona ho manan-tsaina kokoa ary tsy miraika. Libra dia betsaka no tokony hampianarina an'i Virgo momba ny tombotsoan'ny fiaraha-monina sy ny fisokafana. Virgo dia manana zavatra betsaka hampatsiahivana an'i Libra momba ny tombony amin'ny tsiambaratelo.
Tadidio ireo fahasamihafana lehibe entin'ireto roa ireto eo amin'ny latabatry ny fifandraisana izay mety hampirehitra afo. Any amin'ny toerana misy alikaola dia mety may ny afo. Betsaka ny filana (ao sy ivelan'ny efitrano fatoriana) amin'ny lalao fitiavana Virgo sy Libra. Mafy loha sy mafy loha, Virgo dia hanao ny ezaka rehetra hijerena ny fifandraisana. Ny Libra dia mety ho lasa miovaova na mandehandeha na dia tsy toa mandeha tsara aza ny raharaha.
Virgo sy Element Libra
Ny famantarana rehetra dia mifanaraka amin'ny iray amin'ireo singa efatra: Tany, Afo, Rivotra, na Rano. Ireo singa dia mitazona fitaomana mahery vaika amin'ireo famantarana mifanentana aminy. Ireo fitaomana ireo dia mifameno na mifanohitra. Virgo dia mifanaraka amin'ny singa eto an-tany. Libra dia mifanitsy amin'ny singa Air. Satria tsy mitovy ireo singa ireo dia mifameno ihany koa.
Ao amin'ny fifandraisana fitiavana Virgo sy Libra, ny mpivady dia mifarana toa mpivady hafahafa. Saingy, na dia ny 'mpivady hafahafa' aza dia mahita fomba vaovao sy mahafinaritra hifanarahana. Ny angovo eto an-tany dia mahatonga an'i Virgo ho marin-toerana, azo antoka ary azo ianteherana. Ny fitaoman-drivotra dia mahatonga ny Libra miovaova, manidina ary tsy milamina. Miseho izay malemy ny famantarana zodiaka iray, ny iray kosa mahery. Ity duo ity dia afaka mifameno rehefa mifantoka amin'ny tanjaky ny tena manokana.
Earthy Virgo sy Air voataona Libra dia samy marani-tsaina. Tian'izy ireo ny miresaka, fa noho ny antony samihafa amin'ny zavatra samihafa. Virgo dia tsy miraharaha fiteny voninkazo, volom-borona ary resaka tsy ilaina. Fitiavan'i Libra mameno ny rivotra amin'ny feon'izy ireo. Hevitra izy ireo, tia mifosa, ary manana olana amin'ny fitazomana tsiambaratelo. Araka ny voalazan'i Virgo, 'Vaky vava, sambo milentika.' Mila mitandrina i Libra mba tsy hifanakalo hevitra momba ny lohahevitra fady ivelan'ny fifandraisana. Raha tsy manao izany izy ireo, dia hianjera ny andry fitokisana ary ny fifandraisana misy eo aminy.
Virgo dia fisian'ny tsy tapaka izay tsy miova firy. Libra dia afaka manova ny sainy sy ny heviny toy ny rivotra. Virgo dia tsy handray tsara ny volatility an'i Libra satria mitaky tsy fitoviana izy ireo. Mpanemotra i Libra. Toa miseho amin'ny hetsika voaomana izy ireo isaky ny mahatratra ny lay ny rivotra. Ny vanim-potoana sy ny fandaharam-potoana i Virgo dia mifanipaka amin'ny fomba fiainana tsy misy filalaovana an'i Libra.
Ny Virgo Man sy ny Libra Woman dia mety tsy mitovy amin'ny toetra amam-panahy. Saingy, manana tanjona iraisana izy ireo ao an-tsaina. Samy te hanana fifandraisana tia sy tsy misy melodramatika. Ny fifandraisana tsotra kokoa dia ity pairing ity, ny tsara kokoa. Ny Virgo Man sy ny vehivavy Libra dia manana fifandraisana matanjaka tonga amin'ny fanirian'izy ireo hifampiresaka. Ny Virgo Man dia tia ny toetra ara-tsaina amin'ny fifanakalozan-kevitra ataon'izy ireo. Vehivavy iray libra dia tia ny fiheverana omen'i Virgo azy ireo rehefa mandinika izay lazainy izy ireo.
Ao amin'ny raharaha Virgo sy Libra, ity mpivady ity dia mizara fironana mitovy amin'ny fahalavorariana. Ny Libra Woman dia mankafy ny zava-drehetra mahafinaritra, noho ny fitaoman'ny planeta Venus. Handriany ao an-trano ireo sanganasa kanto, loko mampitony ary fanaka mahafinaritra. Ny zoron-trano rehetra dia voalamina tsara sy raisina an-tanan-droa. Ny filàn'i Virgo fahalavorariana dia tanteraky ny filàn'i Libra hatsaran-tarehy tonga lafatra.
Samy manana ny faniriany ny fandaminana. Manampy amin'ny fanamafisana ny fampifanarahana Virgo sy Libra izany. Tsy misy zavatra tsara momba ny tsy fandaminana hoy ny vehivavy libra. Ankehitriny, ny Virgo Man dia mety hanome ity fihetseham-po ity amin'ny alàlan'ny fiahiahy momba ny fahadiovana. Na mety hokosehiny amin'ny fomba tsy mety izy miaraka amin'ny olona tiany amin'ny fikolokoloana sy fikorontanana. Raha variana amin'ny fanadiovana izy dia mandefitra i Libra rehefa lasa mahasosotra ny fiheverana. Ny fikambanana mikorontana dia hamono tanteraka an'i Libra satria hiteraka fitaintainanana.
Ny fifandraisana ara-nofo eo amin'ny Virgo Man sy ny vehivavy Libra dia manomboka mafana sy manasa. Samy mankafy romp tsara ao anaty ahitra na dia kely aza ny lafiny nentin-drazana. Raha fantatr'i Libra ny filàn'ny Virgo fitokisana amin'ny tsiambaratelon'ny mpivady dia hisokatra tsikelikely ny Virgo Man. Rehefa asehon'i Libra fa mitazona ny tsiambaratelon'i Virgo izy ireo, dia miala ny fanakanana. Mamela ny fifandraisana ara-nofo ho lasa erotika sy fanandramana. Ny Virgo Man dia mandà ny hiatrika ny 'oroka sy milaza toe-javatra'. Raha miresaka amin'ny namana momba ny fiainam-pananahana i Libra, dia afaka manapaka ny fifamatorana i Virgo.
Hatramin'ny nametrahan'ny Virgo Man sy ny vehivavy Libra avo lenta ny fari-pitsipika dia nanjary sarotra ny raharaha. Mety hitaky ny tonga lafatra ny roa tonta. Misy io safidy io na dia tsy lavorary mihitsy aza i Virgo sy i Libra. Ny Virgo Man dia ho lasa mpitsikera ary hitaraina amin'ny mpiara-miasa aminy. Vehivavy Libra dia hanao azy ho toy ny mihodina amin'ny lamosiny noho ny firindrana. Saingy, hitahiry sy hihasosotra ny lolompo miafina. Afaka manimba ny lalao fitiavana Virgo sy Libra izany.
Ny Virgo Man dia mivantana amin'ny famahana ny olan'ny fifandraisana. Ny Libra Woman dia mampiasa ny lokony mba hanodikodinana ny fomba hivoahany amin'ireo olana. Eto dia tsy hahita mifanatri-maso ity mpivady ity. Ny Virgo Man dia hieritreritra fa ny vehivavy Libra dia tsy mahatoky sy milalao lalao. Ny marina amin'ity raharaha ity dia miatrika ny toe-javatra izy ireo tamin'ny fomba nahalalany azy ihany.
Samy hafa ny fomba fijerin'ny Virgo Woman sy ny Libra Man. Saingy, mety hahomby izy ireo noho ny tanjona iraisana. Rehefa hitan'izy mivady hoe inona no mampiavaka azy ireo, ny dingana manaraka dia ny fandeferana. Ny toetra mahazatra sy mifanohitra amin'ny fifandanjana dia manamafy ny fifandraisana Virgo sy Libra matanjaka.
Vehivavy Virgo sy Libra Man dia mizara ny faniriana hanana fifandraisana mandritra ny androm-piainana amin'ny olona atokisany. Samy maniry kalitao mahatsapa fahatsapana tsara ho an'ny fifandraisana izay manjaka ny fahasambarana. Ity duo ity dia tsy maintsy hanaiky lembenana amin'ny faritra maro raha toa ka haneho ny nofinofin'izy ireo fitiavana izy ireo. Ny tsy azon'izy ireo atao marimaritra iraisana, ny fandeferana no hikarakara ny ambiny.
Miaraka amin'ny Virgo Woman, izy dia iray izay mitaky ny fanajana ny fotoana. Ny fotoany no fananany sarobidy indrindra, ary tsy tiany ny mandany azy. Hanana kalandrie napetraka feno fanendrena izy. Ny Virgo Woman dia manana drafitra stratejika hatramin'ny farany.
Ny Libra Man dia mila miasa manodidina sy ny fandaharam-potoanany amin'ny drafitra fitsangantsanganana sy ny fifandraisana ara-tsosialy. Eto dia mety hitranga ny olana iray rehefa hitan'ny Virgo ny toetran'i Libra manidina. Ny fironan'i Libra amin'ny fanemorana dia famonoana mpanjaka. Ny Virgo Woman dia hitaraina mivantana amin'ilay lehilahy libra. Tsy manana olana amin'ny fampahalalana azy fa tsy handefitra amin'ny tsy fitoviana izy.
Lehilahy libra tia trano mampiadana. Tsy hisalasala handany vola amin'ny fividianana ny zavatra rehetra mampindrana fampiononana any amin'ny fonenany izy. Ny vola be loatra dia tsy olana satria tsapany fa samy mendrika ny zavatra tsara indrindra izy sy ny vadiny. Ny fahatsapany ny zony dia mety hahatonga azy hanana olana amin'ny Virgo Woman. Ireo loha roa bash ireo amin'ny famaritana hoe iza no mifehy ny tetibola ao an-trano. Manana ady mahatsiravina amin'ny fandaniana koa izy ireo. Vehivavy Virgo izay matetika miafara amin'ny fifehezana ny vola. Handray fepetra fisorohana izy mba hahazoana antoka fa misy fanaraha-maso henjana amin'ny takelaka fanamarinana.
Ny Virgo Woman dia hampianatra ny Lehilahy Libra ny maha-zava-dehibe ny fitehirizana vola amin'izany andro orana izany. Na dia tsy hankafiziny firy aza izy dia hampiala azy amin'ny alàlan'ny famoahana gazety alahady. Asainy mitady varotra izy ary misoratra anarana amin'ny klioban'ny mpikambana ambongadiny. Mandritra izany fotoana izany dia manapaka am-paharetana ny tapakila izy hanampiana ny mpiaro ny tapakila.
Ny zavatra dia miainga avy amin'ny fisarihana sy mahasarika ka hatrany amin'ny fizotra Virgo sy Libra. Raha tsy mikasa ny hanao fitsangatsanganana am-pitiavana ity mpivady ity dia maharary ny fifampitoviana Virgo sy ny Libra. Fanombohana fotsiny ny fitsangantsanganana, ny alin'ny sarimihetsika ary ny fitsangatsanganana amin'ny faran'ny herinandro. Ny Virgo Woman sy ny lehilahy Libra dia mila miasa tsy tapaka amin'ny fifankatiavana.
Misy ambaratongam-volatility avo lenta misy fiantraikany amin'ny lalao fitiavana Virgo sy Libra, fa ny fitiavana kosa dia afaka miaina. Ny filàn'ny Libra amin'ny fandanjana, ny fitiavana ary ny fandriam-pahalemana dia manjaka noho ny toetran'izy ireo manidina. Virgo dia miady ho an'ny fifandraisana raha mahita ny tanjona iraisan'ny Libra sy ny nofinofiny. Mba hitazomana ny fifandraisana dia tsy maintsy apetrak'i Virgo eo amin'ny tsikera folo ny tsikera. I Libra dia mila mandao ny fifosana ary hahafantatra fa misy zavatra sasany tsy natao hizarana amin'ny hafa.
Virgo sy Libra dia afaka mandresy ny fandriky ny fitiavana amin'ny asa mafy sy fanoloran-tena. Saingy, ahoana ny fiainam-pitiavanao? Moa ve ianao sy ny olon-tianao manana ny ilaina amin'ny mitaingin-tsoavaly fitiavana? Vonona ve ianao amin'ireo tadivavarana rehetra sy hoops tadiavin'ny fitiavana? Ny fifanarahanareo dia hanana anjara toerana lehibe amin'ny fahombiazanao. Avelao ny Astros Horoscope Daily hanampy anao hamantatra ny fifandraisan'ny fanandroanao anio? Zahao ny fifanarahan'ny zodiaka raha tsy misy famantarana!
scorpio lehilahy sy pisces vehivavy eo am-pandriana
sary planeta an'ny rafi-masoandro
manaova libra sy leo